Ndị na-emepụta ihe eji eme ihe Jack jack
Ndị na-emepụta ọrụ Hydralic ọkachamara
Companylọ ọrụ ahụ bụ tumadi na-eme nyocha ahụ, mmepe, mmepụta na ahịa nke Creen dị iche iche, ụmụ nkịta hydraulic na ngwaahịa hydraulic.
Ngwaahịa Jack Jack
A na-edeghachi Jack Jack dị ka otu n'ime ndị na-ebubata Porta Pocer Portar Jack Jack Jack Jack dị mma ngwaahịa na arụmọrụ pụrụ iche na izi ezi. Ngwaahịa anyị na-eme ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ site na ọtụtụ afọ, anyị ebuliwo akụrụngwa na ikike nke ndị njikwa, ndị injinia yana teknụzụ.
Ọrụ nhazi maka ihe ndị na-enweghị atụ ma ọ bụ ihe ịma aka.
Everont sistem bụ nchịkọta nke injin dịgasị iche iche, Sydraulic, mpịakọta nke 3t, Jack Inffry nke bụ ahụ e ji arụ ọrụ maka nyocha, mmepe, mmepụta na ahịa.
1. Anyị nwere asambodo: Anyị nwere asambodo tozuru oke
2. Teknụzụpụta teknụzụ: nyocha na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ
3. Afọ ojuju ndị ahịa: Nyepụta ngwaahịa na-eju afọ
Ahịhịa Jack Jack
Akụkụ dị ogologo na akụkụ dị anya nke Jack Power Jack anyị bụ ndị kwesịrị ịdị mma ma nwee ekele maka mpaghara dị iche iche ahịa. A na-eji ngwaahịa anyị niile dabara adaba maka ndị ahịa n'ihi na Jacan ike anyị enyere anyị na-enye anyị iji mejuo ihe dị iche iche nke ndị ahịa chọrọ. Anyị na-ahụ na ọnụ ahịa ọrụ anyị pere mpe.
Anyị nwere mmepe mmepe, ndị otu mmepụta na ndị otu ire.
Zediang Wity HOPEGHE CO. . Companylọ ọrụ ahụ bụ nchịkọta nke engine dị iche iche, ala Jack 3t, Jack Inffry nke bụ ahụ ndị ọrụ pụrụ iche maka nyocha, mmepe na ahịa.